Soosaarid Lacag Leh Oo Lagu Bixiyay Xayeysiiska 'StumbleUpon' | Martech Zone
Arbacada, December 26, 2012 Arbacada, December 26, 2012 Douglas Karr
Qayb ka mid ah caqabadaha leh nuxur weyn ayaa ah awoodda nuxurkaas in la ogaado lana wadaago. Waxaan si adag u shaqeyneynay sanadkii la soo dhaafay si aan u ogaanno waxyaabahayaga - waana shaqeyneysay. Iyada oo loo marayo xilli fasax ah oo miisaankiisu hooseeyo, booqashooyinkeennu waxay ka socdaan qiyaastii 60,000 booqashooyin bishiiba iyo in ka badan 70,000 booqasho. Tan iyo markii aan haysanno kafaala qaadayaal, waxaa lagama maarmaan ah inaan sii wadno inaan u wadno waxyaabaha ku jira dhagaystayaal cusub oo aan tijaabino habab cusub.
Mid ka mid ah hababka aan dhowaan tijaabinay ayaa ahaa Discoum StumbleUpon Bixinta. In kasta oo qiimaha booqde kasta uusan ahayn mid rakhiis ah, haddana waxaa jira astaamo wanaagsan oo nidaamka ah. Waxa aan runtii ugu riyaaqay bixinta lacag bixinta ayaa ah inay sidoo kale bixinayso jawaab celin degdeg ah oo ku saabsan waxyaabaha dhabta ah ee aan wadaagno iyo waxa soo jiitay dareenka ugu badan. In kasta oo StumbleUpon uu damaanad qaadayo aragtiyada iyada oo loo marayo isdhexgalka, wadaagga dabiiciga ayaa sidoo kale dhaca.
Discoum StumbleUpon Bixinta
Soo-booqdayaasha damaanad-qaadka ah - Ha isku hallayn xayeysiiska ama xiriiriyeyaasha. Ka gudub tallaabo oo si toos ah ugu wado bartilmaameedkaaga dhagaystayaasha URL-kaaga (degel, fiidiyow, bogga soo degitaan).
Macnaha ay khusayso - Ku meelee bartaada mawduucyada ku habboon iyada oo qayb ka ah qulqulka bogagga danaha kooxuhu u abaabuleen. Boggaaga waxaa lagu meeleynayaa ka mid ah kuwa ugu fiican webka, qaybaha aad doorato.
Bixi booqde kasta oo gaar ah - Kaliya ku bixi khidmadda, soo booqdayaasha gaarka ah miisaaniyadda aad maamusho. Looma baahna kharash ugu yar iyo xaraash loo baahdo.
Qaybta jahwareerka leh ee 'StumbleUpon Paid Discovery' waa shaqada gacanta ee ku lug leh. Si fudud kuma dari kartid quudinta nidaamka isla markaana si toos ah ayaad kor ugu qaadi kartaa qodob kasta. URL kasta waa in si madaxbannaan loogu daro loona maareeyo. Miisaaniyadda ayaa loo qoondeeyay qadar maalinle ah, laakiin kaliya ma dejin kartid miisaaniyad guud oo aad ku joojiso… waa inaad gasho oo aad jir ahaan joojiso olole kasta. Shirkadaha leh waxyaabo badan oo ay wadaagaan, waa xanuun ku jira badhida. Taasi waa nasiib darro shirkadda - iyo StumbleUpon - maxaa yeelay kuwani waa shirkadaha leh lacagta ay ku bixin karaan.
Aynu rajeyneyno in daahfurka 'StumbleUpon Paid Discovery' uu ku daro xulashooyinka maareynta ololeyaal badan. Marwalba waan jeclaa StumbleUpon oo waxaan sii wadaa qadarinta adeegga ay bixiyaan.
Tags: daahfurka bixisayxayeysiis turunturoondaah-furid lacag bixin ah
26, 2012 at 9: 44 PM
Tani waa wax ay tahay inaan runtii fiiriyo. Marwalba waxaan raadinayaa fikradaha suuq geyn weyn. Waxaan kuugu hambalyeynayaa guushaada iyo mahadnaqa wadaagista!